Crowdfunding Launch Yakaziviswa yeRunescape Kingdoms: Mvuri weElvarg - Gamepoint - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Mutambo webhodhi une subtitle "Kingdoms: Shadow of Elvarg" ichaburitswa yeMMO classic Runescape - kuti izvi zvinozoshanda zvinoenderana nemushandirapamwe wekupa mari yakawanda iyo Verlag Steamforged Games ichatanga muna Chivabvu. Zvichakadaro, zuva chairo rekutanga kwemari rakaiswawo: ndiMay 31st.
SeMMORPG, Runescape yanga iripo kwemakore mazhinji. 201 yakaonekwa zita remugadziri weBritish uye muparidzi Jagex Games Studio. Masevha anoramba achimhanya, kunyangwe nhamba yevatambi yave kungosvika hafu yemiriyoni. Izvi hazvifanirwe kuvanza chokwadi chekuti Runescape yakagadzira mamirioni emaakaundi mumakore apfuura.
Runescape: Mvuri weElvarg paKickstarter
Zvakanga zvagara zvichizivikanwa kuti Steamforged Mitambo Humambo: Mimvuri yeElvarg yaizopihwa mari paKickstarter. Kusvika pari zvino, zvanga zvisati zvajeka kuti chirongwa chekubhadhara mutambo webhodhi chichatangwa rinhi. Ikozvino kune zuva repamutemo: kuvhurwa kwakarongwa kwakarongerwa Chivabvu 31st. Kubva ipapo zvichienda mberi ichave nyaya yekumisikidza vatsigiri uye maMMO mafani kuti vaite mari yeRunescape: Mvuri weElvarg wakasununguka - nemamiriro ezvinhu akaomarara pasi rose, izvi zvinogona kunetsa.
Steamforged Mitambo yakanga yatozivisa mutambo webhodhi Runescape Kingdoms: Mimvuri yeElvarg pakutanga kwegore uye yakafanana nayo. Tabletop RPG. Iyo Jagex Games Studio rezinesi rinoshandiswa kaviri. Nepo peni-ne-bepa offshoot ichifanirwa kuoneka muzvitoro imwe nguva muna 2022, mutambo webhodhi unofanirwa kutanga wapfuura nemubhadharo wemari paKickstarter. Unogona kutonyora zita remusoro ipapo, uye Steamforged Mitambo inoratidzawo dhizaini yebhokisi remutambo ipapo. Iwe unogona kuona gamba pamberi pehombe yechikadzi dhiragoni: "Elvarg". Aive atove akasimba mumutambo dzimwe nguva senge level 110 boss mune template. Pamutambo webhodhi, dhiragoni inofanirwa kushanda semukuru wekupedzisira. Kana pasina rumwe ruzivo, hazvizivikanwe kuti izvi zvichataridzika sei patafura yemutambo webhodhi.
Nekudaro, vatambi vanogona kufunga kuti kuchave nezvakawanda zvinongedzo kuRunescape uye yayo yekare-yechikoro offshoot, zvirinani ndizvo izvo mamwe emitambo yemavhidhiyo ebhodhi mitambo kubva kuSteaforged Mitambo yakazviita nenzira yakafanana. Muparidzi akamboshandisa marezinesi ebhodhi mitambo yeMonster Hunter, Mweya Yakasviba kana Resident Evil uye anoonekwa seane ruzivo mune izvi. Panyaya yemutambo wemutambo, iwe unozogona kuvandudza hunyanzvi hwako sezvo mushandirapamwe wenyaya unofambira mberi, pasina kusungirirwa kumakirasi kubva pakutanga. Saizvozvo, iwo madiki anoshandawo se "zvivharo" kana angori mavatars aunofanira kutamba nekutamba. Pakupedzisira, Runescape Kingdoms: Mimvuri yeElvarg haifanire kunge yakanyanya kunetsa. Steamforged Mitambo sezviri pachena inoronga kuve nechiitiko chenyaya pakadzika kwayo.
Runescape Kingdoms: Mimvuri yeElvarg ichave yemubatanidzwa bhodhi mutambo wevatambi vanosvika vashanu, ine sarudzo yekutamba zita iri wega modhi. Mushandirapamwe weKickstarter uchatanga musi wa31 Chivabvu uye uchaitwa kwemazuva gumi. Hazvizivikanwe kuti Steamforged Mitambo yakaita sei mutengo wemari.
Runescape: Makore makumi maviri Ekutanga--Nhoroondo Yakanyorwa * 32,99 EUR tenga
Kare Escape Room: Idzva bhuku repuzzle nezve vhidhiyo yemitambo yenyika
Inotevera Qwixx: Mutambo wedhayisi rimwe, misiyano yakawanda
Paradox inoburitsa Stellaris yekunyaradza
Darling, bata demo: "The Shining" inouya semutambo webhodhi
Pegasus Mitambo Inosimbisa Nzvimbo Yekugovera
Miedzo Inokwira Yakavhurika Beta: Ubisoft inozivisa zuva